Amaphedi Wokupholisha Omile, Ithuluzi Ledayimane, Ukugaya Idayimane - Bontai
Umkhiqizi waseChina ngokuqondile amathuluzi okugaya amadayimane ephansi
umshini womsebenzi wakho wokukusiza ngezimali ukuthenga okwenza inzuzo ebonakalayo.
2021 umklamo wakamuva 3 ″ ukusetshenziswa okomile kwedayimane pol ...
I-Diamond Concrete Floor Dry Use Resin polishing ...
4″ Amaphedi wokupholisha we-Resin Diamond we-Klind...
I-Fuzhou Bontai Diamond Tools Co., Ltd yasungulwa ngo-2010, inomkhiqizi ogxile ekuthengiseni, ekuthuthukiseni nasekukhiqizeni zonke izinhlobo zamathuluzi edayimane. Sinezinhlobonhlobo zamathuluzi okugaya idayimane nawokupholisha ohlelo lokupholisha phansi, izicathulo zokugaya idayimane, amasondo enkomishi yokugaya idayimane, amadiski okugaya idayimane namathuluzi e-PCD. Izosebenza ekugayweni kwezinhlobonhlobo zikakhonkolo , i- terrazzo , phansi kwamatshe nezinye izitezi zokwakha .
Ukugaya imabula nokupholishwa kuyinqubo yokugcina yenqubo yangaphambilini yokwelashwa kwekristalu yokunakekelwa kwamatshe noma ukucutshungulwa kwepuleti lokukhanya kwamatshe. Kungenye yezinqubo ezibaluleke kakhulu ekunakekelweni kwamatshe namuhla, ngokungafani nokuhlanza nokugcotshwa kwemabula ebhizinisini lenkampani yendabuko ebanzi. T...
Ama-epoxies namanye ama-topical sealants afana nawo angaba yizindlela ezinhle neziqinile zokuvikela ukhonkolo wakho kodwa ukususa le mikhiqizo kungaba nzima. Lapha batusa ezinye izindlela ezingathuthukisa kakhulu ukusebenza kahle kwakho. Okokuqala, Uma i-epoxy, iglue, upende, okokumboza phansi kwakho ...
Idiski Lokugaya Idayimane Lokugaya Ukhonkolo, Terrazzo, Stone Surface
Incazelo yobungcweti yediski yokugaya idayimane isho ithuluzi lokugaya i-disc elisetshenziswa emshinini wokugaya, elakhiwe umzimba we-disc kanye nengxenye yokugaya idayimane. Izingxenye zedayimane zishiselwe noma zifakwe emzimbeni wediski, futhi indawo yokusebenza efana...
Uma kukhulunywa ngesondo lokugaya likakhonkolo, ungase ucabange ngesondo lenkomishi ye-turbo, isondo lenkomishi yomcibisholo, isondo lenkomishi yomugqa owodwa nokunye, namuhla sizokwethula isondo lenkomishi yemigqa emibili, ingenye yamasondo enkomishi yedayimane esebenza kahle kakhulu yokugaya. ukhonkolo phansi. Ngokujwayelekile osayizi abajwayelekile esiba...